Foomamka Macluumaadka Bukaanka - Falls Center Healthcare Church
SOO SAARKA QAABKA
Toos (illaa 12 toddobaad)
Hurdo (illaa 15 toddobaad)
Qiimaha Adeegyada / Caymiska
La-talinta Kala-doorashada Ilmo-soo-ridka
Ku Dalxi Xaruntayada
Macluumaad loogu talagalay bukaanka ka yar 18 sano
Dib u dhig / Beddel Ballan
Foomamka Macluumaadka Bukaanka
Bixi Qiimaynta Dabagalka
Siideynta Diiwaanka Caafimaadka
1. Codso ballan
2. Foomamka Macluumaadka Bukaanka oo Dhamaystiran
Ma dalbatay ballan? Haddii kale, fadlan dhagsii halkan inaad codsato ballan kahor intaadan sii wadin foomamka macluumaadka bukaanka.
Nidaamkani wuxuu kaa qaadi doonaa dhowr foom oo aad ku buuxiso iyo sidoo kale macluumaad la akhriyo oo la daawado. Waxaan kugula talineynaa inaad keydiso 30 daqiiqo si loo dhamaystiro hawsha. Waxaad fursad u heli doontaa inaad dib u eegis ku samayso dhammaan qaababkan iyo macluumaadkaas oo lala yeesho bare bukaan-socod.
Waxaad nagu siin doontaa macluumaadkan sida soo socota:
Macluumaadka xiriirka: Waxaan codsaneynaa macluumaad si aan kula soo xiriirno - iyo sidoo kale macluumaadka xiriirka degdegga ah haddii loo baahdo.
(bukaanka ilmo iska soo ridka oo keliya) Macluumaadka ku saabsan noocyada ilmo iska soo ridka Waxaan jeclaan lahayn inaad dib u eegto macluumaadkan si taxadar leh. Waxay bixin doontaa aragti guud oo ku saabsan nidaamka kala-soocidda ee ilmo soo rididda, xooggooda iyo caqabadaha haysta. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad qirto inaad dib u eegis ku sameysay oo aad fahantay qoraalkan. In kasta oo laga yaabo inaad doorbidid nooca ilmo iska soo rididda, fadlan xusuusnow taas go'aanka wuxuu noqon doonaa mid aad adigu gaarto markaad la tashato shaqaalaha caafimaadka ee FCHC si loo hubiyo amniga iyo caafimaadka.
Taariikhda Caafimaadka: Fadlan tan u buuxi sida ugu macquulsan. Waxaad fursad u heli doontaa inaad dib ugula eegto mid ka mid ah barayaashayada bukaanka ka hor ballantaada.
(bukaanka ilmo iska soo ridka oo keliya) Macluumaadka Dadweynaha: Si loogu hoggaansamo sharciga gobolka Virginia, Xarunteena waxaa looga baahan yahay inay soo uruuriso macluumaadka dadka ee ku saabsan bukaannada daryeelka ilmo soo rididda ee aan aragno. Macluumaadka ku jira sanduuqan waxaa loo gudbiyay Qeybta Diiwaanada Muhiimka ah, Waaxda Caafimaadka ee Virginia. Waan gudbinay macluumaad aqoonsi ma leh oo ay weheliso tan.
(bukaanka ilmo iska soo ridka oo keliya) Faa'iidooyinka, Kala Beddelka iyo Halista Ilmo soo rididda: Waxaan kaa codsaneynaa inaad aqriso dukumintigan oo aad qirato risiidhka. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad kala soo baxdo macluumaadkan.
(bukaanka ilmo iska soo ridka oo keliya) Foomka oggolaanshaha ilmo iska soo rididda: Waxaan kaa dooneynaa inaad ku aqriso tan oo aad qirto inaad aqrisay oo aad fahantay oo aad ogolaatay shuruudaha lagu xusay. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad kala soo baxdo foomkan.
(loogu talagalay bukaanka ilmo iska soo ridka soo rididda oo keliya) Foomka Oggolaanshaha Suuxdinta iyo Suuxinta: Haddii aad ka fikirayso soo ridid ​​nidaam, waxaan kaa codsanaynaa inaad dib u eegto foomkan oo aad qirato rasiidka. Waxaad ku saxiixan doontaa foomkaan ballantaada shaqsiyeed.
(bukaanka ilmo iska soo ridka oo keliya) Tilmaamaha Daryeelka Kadib Fadlan akhri tilmaamaha ku habboon nooca ilmo soo rididda ee aad dooraneyso.
Macluumaadka caymiska iyo Oggolaanshaha: Haddii aad isticmaaleyso caymis waxaan u baahan nahay inaad qirato inaad heshay oo aad fahamtay caymiskayaga.
Ogeysiiska Asturnaanta HIPAA: Waxaan ku soo bandhigeynaa soo koobitaan ku saabsan dhaqammadayaga gaarka ah ee la xiriira daryeelkaaga Xaruntayada. Waxaan kaa dooneynaa inaad qirato siyaasadan asturnaanta oo aan ku siinay ikhtiyaarka inaad hesho nuqul daabacan waqtiga ballantaada.
Saxeexa E-ga iyo Taariikhda: Si loo dedejiyo diiwaangelinta ballantaada shaqsi ahaaneed, waxaan ku siinaynaa fursad aad si elektaroonig ah ugu saxiixdo foomamkan ka hor waqtiga. Waxaad fursad u heli doontaa inaad dib u eegto foomamkan iyo saxiixaaga ballantaada shaqsiyeed. Saxeexida foomamkan maanta waa ikhtiyaari ah.
Mar labaad, fadlan ogow taas waxaad heli doontaa foomamkan si dib loogu eego ballantaada.
Waxaan diyaar u ahay inaan bilaabo!
© 2022 Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls. Lagu abuuray bilaash iyadoo la adeegsanayo WordPress iyo lugeyana-shimbir